Kismaayo News » Shirka wada-tashiga madaxda qaranka oo caqabado hor yaalaan
Shirka wada-tashiga madaxda qaranka oo caqabado hor yaalaan
Kn: Ayadoo maalintii labaad uu galay shirka wada tashiga ee madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyadu ayaa hadana waxaa soo if baxaysa ismariwaa ka dhashay qodobada qaar.
Kadib markii qodobada intii badnayn looga gudbay aynu yeello iyo aynu iska kaashanno aan sugnayn ama qeexid iyo tafaasiil aan lahayn qaabka ay u dhacayso ayaa waxaa lagu kala booday hal qodob oo ahaa kii ugu muhiimsanayaa dhinaca dawladda federaalka ee ay doonaysay in loo meel mariyo.
Madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa qaadacay inay aqbalaan dalabka dawladda federaalka oo ahaa in arimaha dibadda aan loo gacan dhaafin ee loo daayo, laakiin Cabdiwali Gaas iyo Shariif Sh. Aadan ayaa ku adkaysanaya inay tahay arin dastuuri ah ayagoo soo bandhigay qodobo dastuurka ku yaala oo u ogolaanaya inay xiriiryo dibadda ah samayn karaan.
Qodob kan oo ah kan ay madaxda Federaalku aad u danaynayaan maadaama inta kale ee laga wada hadlayaayi ay ayada gacanta ugu jiraan Ayaan la oga’yn in shirki fashil ku dhamaan doono iyo inuu tanaasul imaan doono labada dhinac mid kood.
Isku soo duuboo, shacabka Soomaaliyeed waxay uga fadhiyaan madaxda qaranka isbadal dhab ah iyo in ugu horayn wax laga qabto amaanka dalka.